Cidhibtirka Cudurka Duumada Oo Rajo Fiican Laga Helay
Tuesday September 10, 2019 - 08:21:08 in News by Hadhwanaag News
Duumada ama malaariyada oo ah xunuun in muddo ah aduunka ka jiray kana mid ah xanuunada dilaaga
ah ee ku dhaca bini'aadamka ayaa sanadaha soo socda caalamka laga cirib tiri doona, sida lagu sheegey warbixin lasoo saarey.
Warbixinta lasoo saarey ayaa qeexeysa cirib tirka duumada hada ineysan ahayn rajo fog balse baabi`inta dul ku noolaha keena malaariyada, oo afka qalaad lagu yiraahdo "Parasitka" ay ku bixi doonto laba bilyan oo doolar oo dheeraad ah sanad walba.
Qofka ayaa aad u xanuusada, qandha saa'idna ahna dareema marka ay kaneecadu qaniinto ee ay ku abuurto malaariyada.
Dul ku noolaha ama "parasitka" ayaa saameyn waxyeello ah u geysta unugyada beerka iyo waliba dhiiga, calaamadda lagu garto ayaana ah in qofka ay ku dhacdo dhiig yaraan.
"In muddo ah ciirb tirka malaariyada wuxuu ahaa rajada fog, laakin hadda waxaan heyna cadeyn ah in laga takhalusi karo marka aynu gaarno sanada 2050 -ka " waxaa sidaa yiri Richard Feachem oo kamid ah soo saarayaasha warbixintaan.
"Cirib tirka malaariyada waxeey ahayd hadafyada ugu dambeeya ee faya dhowrka bulshada muddo qarniyaal a , waxay sidoo kale ahayd mid aad u adag ", waxaa sidaa yiri Dr Tedros Ghebreyesus oo ah agaasimaha guud ee hay`ada caafimaadka ee qramada midoobay WHO .
"In lagu guuleysto cirib tirka malaariyada waa wax u baahan hami sare, dadaal iyo iskaashi ka duwan midkii hore, waayo faa'iidada way ka ballaaran tahay waxa la maal galiyey iyo in naf la badbaadiyo balse waa sare u qaadidda noolaha bani'aadanka, xoojinta dhaqaalaha iyo in wax lasoo kordhiyo lana helo duni caafimadkeedu sarreeyo " ayuu yiri Dr Fred Binka oo ka tirsan jaamcada caafimaadka iyo culuumta sayniska ee Ghana.